Tapaka ve i Roblox? Tsia, Aza mino ny tsaho! - Lalao
Roblox manidy dia hiteraka ratram-po amin'ny olona an-tapitrisany amin'ny Internet. Izy io dia iray amin'ireo lehibe indrindra afaka milalao kilalao marobe amin'ny Internet. Tanora an-tapitrisany no milalao ny lalao. Mora azo izy ary manome anao sehatra hananganana fahatsiarovana taonina. Roblox dia sehatra filalaovana multiplayer malaza izay mamela fandaharana sy filalaovana lalao. Roblox dia manasongadina ny famoronana sy ny fiarahamonina.
Natsangan'i David Baszucki sy Erik Cassel tamin'ny 2004 ary navoaka tamin'ny 2006. Izy io dia iray amin'ireo sehatra filalaovana lehibe indrindra eran-tany, misy mpampiasa 48 tapitrisa eo ho eo. Ny lalao dia manana mpamorona lalao maherin'ny 64 tapitrisa izay afaka manao ny sarintany. Malalaka ny vondrom-piarahamonina ary afaka mandray anjara amin'ilay hetsika ny tsirairay.
Torolàlana Roblox misimisy kokoa:
Play Roblox amin'ny Chromebook
Roblox FPS Unlocker avela ampiasaina?
Tapaka ve i Roblox?
Tsia mazava ho azy. Ny tsaho sy ny vaovao tsy marina momba ny fikatonan'ny Roblox dia nipoaka tamin'ny taona 2019, ary ny nahagaga dia tsy nisy olona navela hijanona ho tsaho fotsiny. Nanainga ny lazany ny volana jolay. Diso fanantenana tamin'ny ankapobeny ny mpilalao eran'izao tontolo izao. Kivy tanteraka ireo mpankafy noho ny fiverenan'ilay tsaho. Nahatsiaro ho tsy afa-nanoatra ireo mpankafy ary nandefa ny ahiahin'izy ireo momba ilay tantara (mino fa tena misy izy io) tao amin'ireo lahatsoratra fanavaozana ny kaonty Twitter ofisialin'i Roblox.
Ankoatr'izay, ny fanehoankevitra manelingelina sasany toa ny “R.I.P. Roblox ”dia nahatonga ny fanbase ho lasa wild. Ny tsaho ihany koa dia nilaza fa mihidy i Roblox “noho ny hamaroan'ny olona, ​​tsy manam-bola hanakanana ireo mpizara izy ireo,” ary mihidy hatramin'ny 22 martsa 2020. Nino ireo mpankafy eran-tany fa nanome ny lazany ny lalao. Tamin'ny Janoary 2020, ny bitsika ofisialy Roblox Corporation dia nibitsika toy ny hoho ao an-doha noho ny tsaho, 'ny fanitsiana ny raharaha Roblox dia tsy mihidy ary tsy mino izay rehetra miseho amin'ny Internet.'
Mamerina ny loharanon'ity tsaho ity sy ny vinavinany aorian'izany dia miverina amin'ny React 2424, sehatra iray ahafahan'ny mpampiasa azy mamorona vaovao sandoka sy manaloka ny sakaizany, mampino azy ireo fa tena izy ilay vaovao sandoka. Ireo mpampiasa ny tranokala dia mamorona sy mamoaka vaovao tsy mitonona anarana. Ary noho izany, teraka ny tsaho. Eritrereto hoe mijery ny faran'ny lahatsoratra naterak'ity tranonkala ity ianao manohitra ny fanakatonana an'i Roblox. Amin'izay dia milaza izy fa 'tranokala fialamboly ity, ary ny mpampiasa no mamorona lahatsoratra. Vazivazy sy foronina ireto; tsy tokony horaisina am-pahamatorana izany na ho loharanom-baovao ’.
Saingy tsy nisy nijery an'ity fandàvana ity. Tsy misy olona mahafantatra ny vokany sy ny vokatr'izany. Na eo aza ny fisehoan-javatra mazava fa prank ny lahatsoratra, dia efa nizara in-80000 mahery. Na eo aza ny hadalàn'ity tsaho ity dia nisy mpankafy natokana sasany nandray azy ity tamim-pahamatorana ary namorona vondrona olona 10.000 hanakanana an'i Roblox tsy hikatona.
Manomboka amin'ny tsaho momba ny fanakatonana ny Minecraft sy ny Roblox ankehitriny, ny lanjan'ireo vaovao dia manontany ny fahamendrehana. Saingy nalain'i Roblox teo am-pelatanan'izy ireo ny olana ary nanome toky ny fanbase izy fa tsy handeha hatraiza hatraiza ny lalao, ary noho izany tsy misy antony tokony hatahorana voalohany. Na dia mandady amin'ny internet aza ny tsaho toa an'io, milaza an'izany kosa ny statistika.
Roblox dia mamela ny mpamorona hamorona vola amin'ny zavatra noforoniny tamin'ny fivarotana ny lalao pass. Tamin'ny taona 2017 dia nahazo karama 20 tapitrisa pounds ny mpamorona Roblox. Tamin'ny taona 2018, nitombo tokony ho 50 tapitrisa pounds ny isany, ary tamin'ny Mey 2019, nitatitra ny Business Insider fa mitentina hatrany amin'ny 2,5 miliara dolara i Roblox. Ankoatr'izay, Roblox dia nanoratra mpampiasa mavitrika 100 tapitrisa isam-bolana ary nahazo fidiram-bola 770 pounds. Ireo antontan'isa ireo dia manaporofo fa tsy akaiky hanakatona ny lampihazo i Roblox.
Araka ny fitenenana, 'ny lainga dia mandeha haingana kokoa noho ny marina' dia tsy nisy ohatra nety noho ny nitanisa ny korontana sy ny vinavinan'ity tsaho manokana ity.
Ahoana ny fomba hiampitana tsaho?
Zahao izay karazana fikambanana namoaka ilay lahatsoratra.
Zahao ny URL raha misy sehatra tsy mahazatra.
Google ny lohateny mba hijerena raha misy tatitra sy tranga mitranga mifanaraka amin'ilay lohahevitra.
Hamarino raha nanonona sombintsombiny ny mpanoratra.
Mitadiava zava-misy izay porofo.
Kitiho eto hijerena matetika ny satan'ireo mpizara Roblox. Hanampy anao amin'ny lafiny maro izy io mba hahazoana antoka fa mandeha tsara ny zava-drehetra.
Ahoana no ahafahanao milalao Roblox?
Roblox dia azo lalaovina amin'ny sehatra rehetra amin'ny kaonty maimaimpoana maimaimpoana. Azonao atao ny milalao azy amin'ny P.C., XBOX, PS4, Android, ary ny iOS ihany koa. Afaka misoratra anarana haingana amin'ny alàlan'ny kaonty Facebook-dry zareo ireo tranonkala. Mora ny miditra ary tsy mila fividianana. Misy lalao an-taonina ao anatin'ity lalao ity. Ny fiarahamonina dia lamaody ary manana dobo filalaovan-dratsy. Azonao atao koa ny mamorona lalao miaraka amin'ny studio developer Roblox. Ireto ny dingana hisoratra anarana amin'ny kaonty Roblox.
Azonao atao ny manomboka amin'ny famoronana kaonty Roblox eo amin'ny lampihazo. Mora ny mampiasa azy ary tsy mila ezaka an-taonina. Afaka mamorona ny zava-bitany amin'ny alàlan'ny tranonkala ireo mpampiasa.Azonao atao ny manindry an'io rohy . Hitondra anao mankany amin'ny pejy fisoratana anarana izany.
Ao amin'ny pejy fandraisana dia ho hitanao ny safidy fisoratana anarana. Azonao atao ny mampiditra ny antsipiriany marina toy ny datin'ny mailaka nahaterahana, sy ny maro hafa. Zava-dehibe ireo hanombohana milalao ny lalao. Afaka misoratra anarana amin'ny alàlan'ny kaonty media sosialy ihany koa ireo mpampiasa. Tsindrio ny bokotra fisoratana anarana.
Dia izay! Izao dia mandeha ny kaontinao. Ireo mpampiasa dia afaka manomboka milalao lalao mahagaga amin'ny fampiharana. Azo ampiasain'ny rehetra izy io. Mahatalanjona ireo lalao.
Raha jerena ny vanim-potoana iainantsika dia fahendrena hatrany ny manamarina na inona na inona ary ny zavatra rehetra vakiantsika amin'ny Internet. Na lahatsoratra io na amin'ny alàlan'ny Whatsapp, ary tsy maintsy jerentsika ny fahamendrehan'izy ireo alohan'ny hizarana izany amin'ny hafa. Tsy toerana hampihetsi-po ny Internet. Na dia mety hampihetsi-po antsika aza ny vaovao sasany dia tsy maintsy mieritreritra lojika isika. Toy ny amin'ity tranga ity, Roblox dia manana mpampiasa mavitrika efa ho 150 tapitrisa isam-bolana izay manampy ny sehatry ny lalao miteraka fidiram-bola mitentina £ 770 tapitrisa eo ho eo. Mampalaza azy fotsiny ny fanidiana azy.
Tany amin'ny bitsika ofisialin'i Roblox vao nahatsapa ny mpankafy fa fitaka daholo izany. Ilay goavambe filalaovana Roblox dia nanome torohevitra nilaina kely tamin'ny mpampiasa azy tamin'ny fangatahana azy ireo mba tsy hatoky an'izay rehetra hitany sy vakiany amin'ny media sosialy.
Matokia ianao,Roblox tsy mikatona izao, tsy amin'ny fotoana rehetra.
Kaody fampiroboroboana Roblox
Trolley Problem, Inc - Ny Fantatsika Hatreto
mamindra mozika avy amin'ny iphone mankany mac iTunes maimaim-poana
lisitry ny lalao izay sehatra cross
mijery sarimihetsika mivantana amin'ny Internet maimaim-poana tsy misoratra anarana
ny fomba fametrahana roblox amin'ny chromebook
ahoana no ahafantarana raha sandoka ny airpods 2
mijery horonantsary maimaim-poana amin'ny Internet